Ny Xiaomi Mi A3 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana | Androidsis
Herinandro lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi A3, miaraka amin'ny hetsika nataon'ny orinasa tany Espana. Ora vitsivitsy aorian'ny hetsika dia ny marika ihany navelany taminay ny pitsopitsony amin'ny fandefasana an'ity elanelan-tany vaovao eto amintsika ity. Farany, tonga ny andro, satria amidy amin'ny fomba ofisialy ny telefaona.
Ny Xiaomi Mi A3 no taranaka fahatelo amin'ny marika sinoa hampiasa Android One amin'ny maha rafitra miasa azy. Telefaona maromaro lasa fahombiazana, ka nandrasana fatratra ity taranaka vaovao ity. Mampanantena fahombiazana vaovao ho an'ny mpamokatra sinoa izy io.
Manomboka anio dia azo atao ny mividy telefaona amin'ny fomba ofisialy. Azo amidy amin'ny fivarotana marika izy io, ary koa amin'ny tranokala ofisialiny. Ho fanampin'izay, koa any amin'ny fivarotana hafa, toa an'i Amazon, El Corte Inglés na My Phone House. Ka ho mora ny mahita an'io Xiaomi Mi A3 any Espana io.
Dika roa an'ny telefaona no amidy, miankina amin'ny toerana fitahirizany. Ny maodely fototra dia manana tahiry 64 GB ary tonga amin'ny vidiny 249 euro mankany Espana. Raha ny maodely misy 128 GB kosa dia mitentina 279 euro. Samy vidiny lafo eo antenantenany.
Noho izany, ny zava-drehetra dia manondro fa ity Xiaomi Mi A3 ity Fahombiazana vaovao ho an'ny marika sinoa eto amintsika. Hatramin'ny nivarotan'ny taranaka teo aloha dia nisy faniriana ny hahita izay navelan'izy ireo tamin'ity faritra ity. Mid-range tsara, izay misongadina ambonin'ny zava-drehetra noho ny fakantsary tsara sy ny fahaizan'ny bateria lehibe.
Noho izany, raha mieritreritra ny hividy an'ity Xiaomi Mi A3 ity ianao dia efa afaka manao izany. Misy amin'ny magazay maro izy io, ka tsy hanana olana amin'izany ianao. Ny telefaona dia misy loko manga, mainty ary fotsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Xiaomi Mi A3 dia amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana
Honor dia tsy nandao ny andian-tsarimihetsika Max and Note avy amin'ny katalaoginy finday avo lenta ary hanavao azy ireo tsy ho ela